Nahazo ny Android Wear hifanaraka amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Na dia tsy mikasa hanao fotoana fohy aza i Google Android Wear mifanaraka amin'ny iOS, mpandraharaha iray nahavita nanao ny rafitra fiasan'ireto akanjo azo anaovana io mampiseho fampandrenesana avy amin'ny iPhone.
Ny mpanoratra an'ity zava-bita ity dia Mohammad Abu-Garbeyyeh, mpamorona tweak fanta-daza toa ny DoubleTapToSidur na SpotlightSiri izay nanome ny vahaolana farany hahafahany mampiasa fitaovana Android Wear avy amin'ny iPhone.
Ao amin'ny horonantsary fampisehoana izay anananao ambonin'ireto andalana ireto dia manana Moto 360 ianao, iray amin'ireo smartwatch tsara tarehy indrindra izay misy amin'ny Android Wear ankehitriny ary tsy afaka ampiarahina amin'ny iPhone ho toy ny mahazatra. Noho ny asan'i Mohammad dia afaka ny fiambenana mampiseho fampandrenesana voaray ao amin'ny rindranasan'ny Messages.
Ny zavatra tsara indrindra momba izany rehetra izany dia ny tsy nilaina ny nanamontsana ny iPhone. Ny hany fepetra takiana dia ny fametrahana APK namboarina tsara amin'ny fitaovana Android Wear. Mazava ho azy, misy fetra tena lehibe ary izany dia amin'ny ankapobeny, ny azo itondra afaka manova fampandrenesana fotsiny izy io ary tsy misy hafa. Azontsika atao ny manadino ireo endrika fifandraisana mandroso kokoa hampiasa fampiharana.
Mba hanarenana io tsy fahampiana io dia afaka nanao izany i Mohammad mamolavola tweak izay manome fari-javatra malalaka kokoa. Ity safidy ity dia mbola miakatra eny amin'ny habakabaka toy ny sisa amin'ny tetikasa satria tsy nisy daty famoahana nomena hankafizana an'io APK novaina io.
Raha misy zavatra mety mandratra Apple Watch dia ny afaka mankafy fitaovana Android Wear avy amin'ny iPhone na dia tsy misy aza ny fanohanan'ny Google ofisialy, dia toa sarotra loatra izany fotoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Android » Ny mpamorona iray dia mahatonga ny Android Wear hifanaraka amin'ny iOS
Mariano Mottassi Fernandez dia hoy izy:
Ie? Nanandrana izany tamin'ny gwatch-ko aho
Valiny tamin'i Mariano Mottassi Fernández
Mauro Amircar Villarroel Meneses dia hoy izy:
Manantena aho fa tonga amin'ny endrika tweak, mety tsara
Valiny tamin'i Mauro Amircar Villarroel Meneses
Web Makeovr: tranokala mamorona habaka banga eo anelanelan'ny kisary amin'ny iPhone